Orinasa sy mpamatsy entana escalators anatiny sy ivelany any Sina | Tianhongyi
Tiancalyi escalator dia manana endrika marevaka sy marefo, endrika kanto ary tsipika malama. Ny fehiloha noely sy maroloko ary manify be manify ary takelaka fitaratra manana tanjaka avo lenta mahatonga ny escalator ho mendri-kaja sy kanto kokoa. Ny escalator dia misy làlan-tohatra sy fantsom-panafody amin'ny lafiny roa. Ny singa lehibe ao anatiny dia misy ny dingana, ny rojo vy ary ny sprockets, ny rafitry ny lalamby, ny rafitra fitaterana lehibe (ao anatin'izany ny motera, ny fitaovana fampivoarana, ny frein ary ny rohy fampitana eo anelanelany, sns.), Ny familiana fiara ary ny lalana tohatra. Fitaovana fihenjanana, rafi-pitantanan-tànana, lovia famafazana, rafitra escalator ary rafitra herinaratra, sns. Ireo dingana dia mihetsika mitsivalana eo amin'ny fidiran'ny mpandeha (ho an'ireo mpandeha hiakatra amin'ny tohatra), ary avy eo mamorona tsikelikely; eo akaikin'ny fivoahana, manjavona tsikelikely ireo dingana, ary mihetsika mitsivalana indray ireo dingana. Ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny sandry dia misy jiro famantarana ny tari-dalana mba hanondroana ny lalana aseho sy ny fisehoan'ny tsipika fandrarana, ary ny fiarovana ny mpandeha dia azo antoka amin'ny alàlan'ny tsipika famantarana na tsipika fandrarana. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny toerana misy olona mifantoka toy ny gara, dock, toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina ary metro.
1. Escalator tokana
Ny fampiasana tohatra tokana mampifandray ambaratonga roa. Izy io dia mety amin'ny fikorianan'ny mpandeha indrindra amin'ny làlan'ny fivezivezin'ny tranobe, afaka manamboatra fanovana mifanaraka amin'ny filan'ny mpandeha (ohatra: ny maraina, hariva midina)
2. Fandaharana mitohy (fifamoivoizana tokana)
Ity fandrindrana ity dia ampiasaina indrindra amin'ny magazay kely, mba hitrandrahana fivarotana telo hatrany. Ity fandaminana ity dia mihoatra ny habaka takian'ny fandaminana miserana.
3. Fandaminana tapaka (fifamoivoizana mandeha tokana)
Ity fandaminana ity dia hitondra fahasahiranana ho an'ny mpandeha, nefa mahasoa ny tompona toeram-pivarotana izany, satria any ambony na any ambany ny escalator ary ny elanelana misy eo amin'ny famindrana dia ahafahan'ny mpanjifa mahita fampirantiana voarindra manokana.
4. Fandaharana tsy misy tohiny (fifamoivoizana an-dàlana)
Ity fandaminana ity dia ampiasaina amin'ny fivezivezena amin'ny fivarotana fivarotana lehibe sy fitaovam-pitateram-bahoaka. Rehefa misy escalator mandeha ho azy telo na mihoatra ny telo dia tokony azo atao ny manova ny làlan'ny fivezivezena arakaraka ny fivezivezin'ny mpandeha. Ity toe-javatra ity dia mirary toekarena kokoa, satria tsy mila baffle anatiny.
Teo aloha: Ny kabinetra fanaraha-maso mpanjaka dia mety amin'ny ascenseur
Manaraka: Elevator mandoro miaraka amin'ny fampiharana malalaka sy fiarovana avo lenta